Ku guuleysatayaasha abaal-marinta Ballon d’Or & Saddexda xiddig ee isugu soo haray tartanka abaal-marintan laga soo bilaabo 2000 illaa 2018 - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
December 2, 2019 at 10:25 Ku guuleysatayaasha abaal-marinta Ballon d’Or & Saddexda xiddig ee isugu soo haray tartanka abaal-marintan laga soo bilaabo 2000 illaa 20182019-12-02T10:25:17+01:00 CAYAARAHA
Tani waxa ay noqon doontaa markii 64-aad oo abaal-marintan la bixin doono, waxaana markii ugu horreysay la guddoonsiiyey Sir Stanley Matthews sanadkii 1956-kii.
Waxaa la bixin doonaa abaal-marintan marka ay caawa saacadda Geeska Afrika tilmaameyso 9:30 daqiiqo waxaana marti galin doonta Magaalada Paris iyadoo lagu qaban doono Theatre du Chatelet.
Marka la eego xafladda abaal-marinta sanadkan 2019 lagu bixinayo caawa Messi ayaa la saadaalinayaa inuu markiisii lixaad abaal-marintan gacanta ku dhigi doono, isla markaana uu ku garaaci doono daafaca Liverpool ee Virgil van Dijk.
Xiddiga reer Holland ayaa kaalin mug leh ka qaatay kooxda Jurgen Klopp tan iyo markii uu kaga soo biiray Southampton bishii Janaayo ee sanadkii 2018, waxaana uu ka caawiyey inay ku guuleystaan markoodii lixaad Koobka horyallada Yurub ee Champions League.
Si kastaba ha ahaatee, xiddiga Barcelona wuxuu ku guuleystay abaal-marinta FIFA Best ee Ragga bishii Sebtember, isla natiijadan ayaa la filayaa inuu markale gacanta ku dhigo caawa abaal-marinta Ballon d’Or.
Haddaba waxaan halkaan hoose ku eegeynaa sida loogu kala guuleystay abaal-marinta Ballon d’Or & Saddexda xiddig ee isugu soo hartay tartanka abaal-marintan laga soo bilaabo sanadkii 2000 illaa 2018:-
Ballon d’Or 2019…caawa………?
« Somaliya & Sweden oo heshiis kala saxiixday
Bangiga Amal oo mashruuc $90 million ku kacaya ka fulinaya Garowe »